ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဇာတိမြေ (သို့မဟုတ်) သတိတရ ရှိလှတဲ့အိမ်”......(၁)
ကိုပေါရေ...မဒမ်ပေါကိုပြောပေးပါ...ကျွန်မနှလုံးသားကို ထိရှသွားတဲ့postလေးပါလို့...မဒမ်ပေါကို အများဖတ်လို့ရတဲ့blogလေးတခုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းကြည့်ပါလား။ (postကောင်းကောင်းလေးတွေ ကိုပေါတယောက်ထဲဖတ်နေတာ မနာလိုဘူး...တို့လဲဖတ်ချင်တယ်)
ကိုပေါ အမျိုးသမီး ကို.. ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ မဖွင့် တောင်.. အဲဒီမှာပဲ.. ကူရေး ခိုင်း ပေါ့.. သူရေး တာ ဖတ် လို့ကောင်းတယ်... ငယ် ငယ် က..အမေ နဲ့ အတူ မနေ ရ တဲ့.. အဖြစ် တွေ ကလည်း..ကိုယ်နဲ့ တထပ် တည်း မို့.. ဖတ်ရင်း..နားလည် လွမ်း ဆွေး မိပါတယ်။
အော် ကိုပေါ ကိုပေါ
မဒမ်ပေါ စာမူနဲ့ လုပ်စားသပေါ့..
မဒမ်ပေါက စာရေးကောင်းမှကောင်းပဲ... စာမူခပေးလိုက်ဦးနော်.
(ကိုပေါအား ပထမဆုံးသော တက်ဂ်သူဘွဲ့ရဘလော်ဂါ)
မဒမ်ပေါကို လွတ်လပ်စွာ ဘလော့ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပေးလိုက်ပါ
It's really nice post and also remind me one of sound name (Mother's House) which very famous in burma during 1969 ~ 70. No place like mother home.
လာလည်ဖတ်ရှုကြသူအပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မဒမ်ပေါ ဘလော့ဂ်ကို အများပြည်သူကို ဖွင့်လှစ်ပြလို့ မဖြစ်ချေဘူး။ မစ္စတာပေါ ကိုယ်ကျိုးနည်းစရာတွေ ပါတယ်။ အဟိ။
တခြား သီးသန့် ဘလော့ဂ်တခု ထောင်ဘို့တော့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါမယ်။
Hi, ko Paw, just for y(our) home.
>>>>>တင်........ သီချင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းဟာ ကျနော် အင်မတန် နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းတပုဒ်ပါဘဲ။